Oday Bislow Barbarkaa Magacii, Kuun kuun Kuman Saar ka u Dhaxe ee u Dheer ku Jabtooy ku Jaqdhabo – Rasaasa News
Caruurnimada Baadiyaha ruuxii yaqaan baa yaqaane, caruurtu waxaa ay ciyaaraan ciyaaro aad u xiiso badan, kolka xoolaha la raaciyo ciyaaraha waxaa u xiiso badan ciyaarta geela geelaysiga. wiilashu waxaa ay soo urursadaan Saalada geela iyaga oo ka dhigaya geel iyaguna iska dhigaya rag, gabdhuhuna waxay soo urursadaan saalada adhiga iyaga oo ka dhigaya adhi iyaguna iska dhigaya haween.
Arimahaas waxaa ay ku matalaan Qoryo u kala eg haween, rag iyo caruur, guryo yar yar ayey dhistaan qoryaha oo matalaya rag iyo haween waxay u maamulaan sidii iyaga oo nool caruurtooduna waxaa ay raacaan xoolaha, ragu xoolaha ayuu waraabiyaa oo uu oodaa, haweenkuna hawsha guriga iyo adhiga ayey qabtaan.
Waxaa ay matalaan reer kaamil ah oo wax waliba u dhan yahay sida reerkooda dhabta ah ay yihiin oo kale, waxaa meelahaas caruurta uga bilowda in ay is jeclaadaan in kasta oo ay kala kaxayso nolosha baadiyuhu oo ayna waligoodba dib isu arag.
Maanta oo dhan waxaa ay caruurtu ku jeedaa ciyaartaas oo loo yaqaan geela geelaysi, way isku diriraan inta badan, kolka ay isku daalaan ee ay qoraxdu liiqa dhigto ayaa waxaa ay sameeyaan ciyaar kale oo la yidhaahdo Kuun-kuun, oo ah is reer reeb si loo kala tago oo ciyaarta geela geelaysiga loo soo gabo gabeeyo.
Murtida Qormadu waxaa weeye, Halganka Somalida Ogadeeniya ee ay Jwxo horseedka ka ahayd, waxaa uu u ekaa dhismihiisu sidii dadwlad oo kale, dad badan oo aqoon leh ayaa waxaa ay ku doodi jireen war arintiinu waa geela geelaysi. Hadaba dadkii uu halgankaasi dhabta ka ahaa qaarna dhimay qaarna dhismay ku jiraan si loo badbaadiyo halgankii ay ku tiir iyo tacab beeleen. Dadkii ay geela geelaysiga ka ahaydna maanta waxaa ay ku jiraan Oday bislow barbarkaa magicii.
Waxaa dhulka galay dhamaan xoogagii jidbaysnaa ee uu ruux waliba lahaa adeer Jwxo-shiil baa Jabhada madax ka ah adiguna gal, waa dhibaato hadii ayna ruuxa niyada ka ahayn waxa uu samaynayo.
Waxaa dhamaatay Adeer Maxamed Cumar Cismaan oo waxaa lagu badalay Jwxo-shiil, Waxaa dhamaaday haweenkii u haliili jiray in ay isla sawiraan si ay haweenka kale u tusaan in ay Jabhadad tahay.
Waxaa dhulka galay dhaantadiid beenta bulshada beesada laga qaadayey, waxaa dhulka galay dhalintii iskuulada dhigan waayey ee dhaqan celiska ay hooyooyinkood dhaantada ula jeclaadeen.
Waxaan iyana is hayn oo hoosta ka kala siibtay kaadir ku sheegi Jwxo-shiil ee awal hore hareera tubnaan jiray. Waakii ayno kol hore qoray kobta uu xaalkoodu maraayo kuwii halganka khayaamay ee hore u sheegan jiray hogaamada.
Abtidoon oo buufis cirkaa maraya ayey nafi ka caydhisay London, waxaa kale oo uu aamin waayey Cibaado iyo Cabaas oo soo taabtay runtii, dhinacana ka raacay dadkooda iyaga oo waliba dhinac kaga jira doondoonka kuwii duhurka dilay Daladii halganka Ogadeeniya Dr. Dolal.
Abtidoon oo ay ku soo kacday hurgumadii dambigii uu ka galay wada dhalashada iyo dhiigii lagu shubay ee Dr Dolal ee uu raaliga ka noqday in la dilo, ayaa waxaa maanta meel cidla ah kaga dhaqaaqay Jwxo-shiil, waxaana uu qoomamaynayaa dhalashadii uu dhinaca iska dhigay. Abtidoon dhimashada Dr. Dolal aad buu ugu farxay waxaana uu ka mid yahay afarta ruux ee wax ka ogayd dilkiisa, hadii ayna taasi jirin waxaa laga arki lahaa isaga oo muujinaya murugo, kuna caawinaya Marxuunka Abaalkii uu ummada u galay.
Ergada oohinta ee Abtidoon waa Oday Bislow barbarkaa magicii, kuun kuun kuman saar ka u dheer ee u dhaxe ku jabee jid isii.
Dire Dire Dab Naareedow Rabi Diirka kaa Qaad